Soomaalida: Dadkii Jaadka cunayay ma fuud bay ka dhergeen? - Jigjiga Online
HomeSomalidaSoomaalida: Dadkii Jaadka cunayay ma fuud bay ka dhergeen?
in Soomaaliya laga mamnuucay jaadka waxa ay dadka qaar u noqotay fursad ay ka faa’idaan, halka kuwa ay u ahayd burbur iyo caqabad noolashooda ku timid.
Jaadka ayaa ka baxa dalalka Kenya iyo Itoobiya, dadkan ugu badan ee cunana waa Soomaalida.
Xilliyada caadiga ah marka uu Jaadka soo dhaco ragga ayaa la waayaa meel ay jaan iyo cirib dhigeen oo guriyahooda ka soo baxa iyaga oo fadhiista Marfashyada lagu qayilo.
Jaadka oo sidoo kale dadka qaar ay u yaqaanaan miraa, ayaa ah caleen jirka kicisa oo dadka qaar ay ka helaan fahmo iyo farxad inta uu cunayaan.
Inta Jaadka ay u fadhiyaan wax walba way u sahlan yihiin waxayna galaan heshiisyo ganacsi iyo arrimo kale, balse jaadka ka dib waxaas oo dhan midna kama hayaan, sababtoo ah maba jirin.
Bishii March, dowladda soomaaliya waxay mamnuucday duulimaadyada caalamiga ah, waxaana ka mid ah diyaaradaha la joojiyay kuwii Jaadka keeni jiray taasi oo qeyb ka ahayd dadaalka lagu xakameynayo cudurka corona fayras.
Markii la soo saaray tallaabooyiinka xayiraadaha, waxaa la mamnuucay in dadku ay isu yimaadaan oo jaadka la wada cuno maadaama ay taasi jabinayso xeerarka kala fogaanshiyaha.
Saraakiisha dowladda waxay ka digeen in maadaama Jaadka gacmaha lagu qab-qabto uu noqon karo waddo uu ku fido COVID-19.
Balse Jaadka wali si qarsoodi ah ayaa lagu geliyaa Soomaaliya in kastoo dad badan oo cuni jiray ay u baaqatay lacagtii ay ku bixinayeen ayna waxyaabo kale ku iibsadaan hadda.
Qaababka lagu soo galiyo waxaa ka mid ah in waddooyiinka uu soo maro sida kan Itoobiya ka yimaadda iyo midka Kenya oo doomo lagu qaado.
Ganacsatada jaadka dalka Kenya waxay sheegeen in ay waayeen waxyaabihii ay noloshooda ku dabari jireen.
Xaaladda ayaa si gaar ah u taabatay deegaanka Meru ee Kenya oo ah meesha uu Jaadka ka baxo.
Ganacsatada ka soo qaadata beeraleyda
Gudoomiyaha ururka ay ku bahoobeen ganacsatada Jaadka, Kimathi Munjuri, ayaa sheegay in xubnaha ururkii ay caasimadda Muqdisho u dhoofin jireen maalinkii Jaad qiimihiisu yahay $250,000.
Ku dhawaad nus milyan beeraley ah ayaa beeerata jaadka gobolka Geeska Afrika ka baxa intooda badanan mamnuucidan saameyn ballaaran ayay ku yeelatay.
Inkastoo inta badan dadka Jaadka iibiya ee Soomaaliya aysan haysan wax ay ka ganacsadaan hadana waxaa jiro dad kale oo lacag ka sameeyay oo ka macaasha.
“Ka hor COVID-19, waxaan heli jirnay jaad Fereesh ah,” waxaa sidaasi sheegtay haweeney ku iibisa Muqdisho. “Hadda waxaan si sharci daro ah uga soo galinaa magaala xeebeedka Kismaayo,” ayey hadalka ku dartay.
“Hadda waa la xaddiday, qiimaha ayaan kordhin karnaa, halkii kilo waxaan iibin jiray $20-$25, balse hadda waxaan iibinaa $120, mamnuucidda aad ayay noogu wanaagsaneyd”.
“Nin aan jaad cunin waa Kaluun biya la’aan ah,” ayuu yiri Maxamed Cabd oo Jaadka ku cuna Muqdisho. “Waa inaan helo anigoon eegeyn waxa uu yahay. Balse ma awoodo qiimaha aadka sare ugu kacay, marka waxaan ku dhowahay inaan waasho.”
“Waan jooojiyay cunidda Jaadka sababtoo ah qiimaha ayaa aad u sareeya”, ayuu yiri Xasan Cabdiwali. “Qaar ka mid ah asxaabteyda waxay billaabeen in ay isticmaalaan daroogo kale sida kuwa guryaha lagu farsameeyo.”
“Kuwa kale waxay billaabeen in ay wax dhacaan si ay awood ugu helaan in ay Jaadka iibsadaan, dadkeena jecel Jaadka, tani waa xaaladdii ugu xumeyd ee na soo marta”
Cunadda qaadka ayaa waxaa uu sidoo kale caan ku ah ciidamada ammaanka oo mushaarka la siiyo uu aad u hooseeyo islamarkana aan awoodin in qiimaha hadda ku iibsadaan.
Jaadka la qabto waa la gubayaa
Waxaa jira warar sheegaya in qaar ka mid ah booliska iyo askarta qaarkood ay xadaan taleefoono iyo lacag si ay Jaadka ugu iibsadaan.
Jaadka waxaa aad looga cunaa degaannada Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqda madaxbanaanida ee Soomaaliland halkaas oo si kumeelgaar ah looga mamnuucay si cudurka Corona loo xakameeyo.
Dowladda Soomaliland ayaa sheegtay in inta jaadka la cunayo aysan suuragal ahayn kala fogaanshiyaha bulshada, balse ay xaaladda qiimeyn doonaan bisha Ramadan ka dib.
Inta badan Jaadka Soomaaliland wuxuu ka yimaadaa dhanka dalka Itoobiya.
Gawaaridda lagu raro jaadka waxay ku socdaan xawaare aad u dheer waxayna hoonka yeeriyaan marka ay soo galayaan magaalooyiinka taasi oo calaamad u ah jaadka cusbaa ayaa soo dhacay.
Gawaaridda lagu qabtay iyaga oo si sharci daro ah Jaadka ku soo galinaya waxaa la wareegay dowladda, waxaana la gubaa jaadka la qabto.
Qaar badan oo ka mid ah dadka Jaadka iibiya oo u badan Haween waxay aqbaleen mamnuucidda iyaga oo sheegay in caafimaadka dadka ay wax walba ka muhimsan yihiin.
Balse kuwa kale oo ka mid ah ganacsatada ayaa si qarsoodi ah ku soo galiya si qiimaha aadka u sareeyay ay ugu helaan.
“Waxaan filayay in dadka qaar ay si sharci darro ah Jaadka ku soo galiyaan Somaliland inta lagu guda jiro joojinta,” waxaa sidaasi yiri madaxwaynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi. “Balse ma filayn in dad ka badan boqolkiiba 30% oo bulshada ah ay la qabatimeen oo ay sameynayaan wax kasta oo uu qaadka gacantooda kus oo gali karo.” ayuu intaa ku daray.
Qaar ka mid ah bulshada ayaa ku farxay mamnuucidda Jaadka, sida Abuukar Cawale. “Mamnuucidda waa naxariis alle cirka nooga soo dajiyay,” ayuu yiri.
Qaar ka mid ah dhakhaatiirta waxay shegeen in jaadka oo si joogta ah loo cuno ay horseedi karto in la qabatimo iyo xanuun dhanka maskaxda ah, inkastoo guddigii UK ee loo saaray baarida jaadka oo markii dambe laga mamnuucay ay sheegeen in aysan jirin cadeyn muujinaysa xiriir toos ah oo ka dhaxeeya jaadka iyo xanuunada Maskaxda.
Tallaabooyiinkii horey loogu mamnuucay jaadka ee Soomaaliyan ayaan si joogto ah u dhaqangelin.
Suurgalnimada ah in siyaasiyiinta ay qeyb ka noqdaan mamnuucidda ayaa aad u yar wuxuuna Jaadka udub dhaxaad u noqday dhaqaalaha iyo noolasha bulshada.
Sidoo kale Waxaa jirta in dadka haya xilalka sare ee awoodda ay qaarkood ay cunaan jaadka.